I-Jamaica Yemukela Izindiza Ezintsha ezivela e-German Airline Eurowings
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJamaica » I-Jamaica Yemukela Izindiza Ezintsha ezivela e-German Airline Eurowings
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Izindaba zaseJalimane • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Ihlotshiswe ngefulegi lase-Jamaica, inkampani yesithathu enkulukazi ye-European point-to-point, i-Eurowings, yenza indiza yayo yokuqala isuka e-Frankfurt, e-Germany, iya e-Montego Bay e-St. James. Indiza yafika ngobusuku bangoNovemba 3, 2021, inabagibeli abangu-211 nabasebenzi.
Inkampani ethwala iphoyinti ngephuzu lesithathu ngobukhulu eYurophu, i-Eurowings, yenze indiza yayo yokuqala isuka eFrankfurt, eJalimane, yalibangisa eMontego Bay eSt. James izolo kusihlwa.
IJalimane kube yimakethe eqine kakhulu eJamaica, enezivakashi ezingama-23,000 ngo-2019 ngaphambi kwalolu bhubhane.
Lokhu kuzosiza futhi emkhankasweni weJamaica wokwandisa izivakashi ezifikayo ezivela e-Europe, okukhonjiswe umthamo wezihlalo zendiza phakathi kwe-UK neJamaica manje ngo-100% walokho okwakuyi-pre-COVID.
I-Jamaica ivulekele ibhizinisi futhi iyindawo ephephile enezinga lokutheleleka nge-COVID elisondela ku-zero ku-Resilient Corridor.
Ezokuvakasha zaseJamaica Ungqongqoshe, uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett, ejatshuliswe izindaba zalo mzila owengeziwe ovela eJalimane, uthe ngokungangabazeki kuzoqinisa ukuxhumana kwesiqhingi nemakethe yaseYurophu.
“I-Jamaica ijabule kakhulu ukwamukela indiza yokuqala evela e-Eurowings izolo kusihlwa. IGermany ibe yimakethe eqine kakhulu kithi, njengoba izivakashi ezingama-23,000 ezivela emazweni azo ziza ogwini lwethu ngo-2019 ngaphambi kwalolu bhubhane. Ngiyazi ukuthi lesi sibalo sizokhula ngezindiza ezingami manje ezitholakala e-Eurowings naseCondor,” kusho uBartlett.
“Le ndiza evela eGermany izophinde isize emkhankasweni wethu wokwandisa izivakashi ezivela e-Europe, okuyiqembu lami ebelisebenzisana kakhulu nalo. Eqinisweni, umthamo wezihlalo zendiza phakathi kwe-UK neJamaica uku-100% walokho okwakuyi-pre-COVID. Sifuna ukuqinisekisa ozakwethu kanye nezivakashi ezizayo esiqhingini ukuthi I-Jamaica ivulekele ibhizinisi futhi iyindawo ephephile enezinga lokutheleleka nge-COVID elisondela ku-zero ku-Resilient Corridor,” engeza.
Indiza i-Eurowings Discover, ebinabagibeli nabasebenzi abangu-211, yamukelwe ngenganono yamanzi esikhumulweni sezindiza i-Sangster International Airport (SIA) lapho ifika.
Abagibeli bamukelwe yiPhini leMeya yaseMontego Bay, uKhansela Richard Vernon; Inxusa laseJalimane e-Jamaica, uMhlonishwa uDkt. Stefan Keil; Umqondisi Omkhulu we-Jamaica Vacations Ltd. Joy Roberts; kanye noMqondisi Wesifunda e-Jamaica Tourist Board, u-Odette Dyer.
Isevisi entsha izondiza kabili ngeviki ingene eMontego Bay, isuka ngoLwesithathu nangeMigqibelo, futhi ithuthukise ukufinyelela esiqhingini kusukela eYurophu. Kubalulekile ukuveza ukuthi i-Jamaica ibheke ukuthola izindiza ezingami eziyi-17 ngesonto eziphuma e-United Kingdom. Ukwengeza, inkampani yezindiza yezokungcebeleka yase-Swiss, i-Edelweiss, iqale izindiza ezintsha kanye ngeviki eziya e-Jamaica ngenkathi i-Condor Airlines iqale kabusha cishe kabili ngeviki izindiza phakathi kwe-Frankfurt, Germany ne-Montego Bay ngoJulayi.
I-Eurowings iyinkampani yezindiza eshibhile yeLufthansa Group futhi, kanjalo, iyingxenye yeqembu elikhulukazi lezokundiza emhlabeni. Basebenzisa uxhaxha lwezindiza eziyi-139 futhi basebenza ngokukhethekile ezindizeni eziqondile ezingabizi kakhulu kulo lonke elaseYurophu.